नेपाली समाजले नदेखेको छुट्टै अंग म सँग छैन : सरस्वती लामा !
March 28, 2022 AdminLeaveaComment on नेपाली समाजले नदेखेको छुट्टै अंग म सँग छैन : सरस्वती लामा !
सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्ड गाउँपालिकामा जन्मिहुर्की यही हावापानीमा बाल्यकाल बिताएकी, गाउँमा घाँस, दाउरा, मेला(पात, हाट(बजार गरी बाल्यकालको केहि समय सोलुखुम्बुमै बिताएपछी काठमाडौ छिरेर सगित क्षेत्रमा जमेकी नेपाली गीत(संगीतको क्षेत्रमा सफल रक गायिका हुन् सरस्वती लामा ।
सानै उमेरदेखि गीत गाउने रुचि उनमा थियो । काठमाडौ आएपछि अध्ययनको सगै उनले संगीत सिक्न सुरु गरिन् र संगीतमै अध्ययन पुरा गरीन। रक गायिकाको नाताले उनि केहि भल्गर छिन् जुन हाम्रो समाजले पचाउन अलीकति गार्हो मान्छ । देश विदेशमा आयोजित थुप्रै साङ्गितिक कार्यक्रमहरु उनले भ्याईसकेका छन् ।
छोटो समयमै धेरै नेपाली र विदेशिहरु समेतको फेवरेट बनेकी सरस्वती लामा एक समाजसेवी पनि हुन् । केहि सामाजिक संघ(संथामा समेत आवद्द उनको ३ दर्जन भन्दा धेरै गीतहरु रेकर्ड भईसकेको छ ।
उनको पहिलो गिति एल्वम उत्तर पुर्व हो त्यहि एल्वमको उडिजाने गित वाट दर्शकले उनलाई रक गायिकाको ट्याग दिएका हुन । दोस्रो “उर्वसी” नामक गीति एल्बम पनि बजारमा आईसकेको छ। उनको उर्वसी को शिर्ष गित उर्वसी नै हिट भएको छ।
सोलुखुम्बु जिल्लाकी सरस्वती लामा ह,ट कलाकारको लिस्टमा पर्ने गर्छिन् ।उनलाई महोत्सबकोे समययमा स्टेजकोे कार्यक्रममा भ्याईनभ्याइ हुन्छ । उनी स्टेजमा कार्यक्रमहरुमा हिपहप र रक गीत गाउदै नाच्न र नचाउननै व्यस्त हुन्छिन ।
उडि जाने हावा” बोलको गीतबाट गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी सोलुखुम्बु जिल्लाकी सरस्वती लामा ह,ट कलाकारको लिस्टमा पर्ने गर्छिन् । उनलाई महोत्सबकोे समययमा स्टेजकोे कार्यक्रममा भ्याईनभ्याइ हुन्छ । उनलाई कार्यक्रमहरुमा दर्शक श्रोताहरु तान्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
महगो पारिश्रमीक लिने गायिकाको रुपमा उनको नाम पनि आउने गर्दछ । उनले गीत लेख्ने देखि लिएर सङ्गीत दिने भिडियो निर्देशन तथा मोडलिङ पनि आफै गर्छिन् । उनले गाएका कतिपय गीत चर्चामा पनि रहेको छ !
श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि छोरासँग विहे गरेर ग‘र्भवती..
बल्ल भारतीएको शेखी झार्यो नेपाली शसस्त्रले Nepal Bharat
२५ बर्षिया सुत्केरी महिलाको मृत्यु, कारण सुन्दा पक्कै तपाई रुनु हुन्छ
बिहेको लागी केटा खोज्दै: मलाई जुन जातको केटा भएनी हुन्छ, असल र इमानदार चाहियो
भर्खरै आयो यस्तो दुखत खबर जँहा के’ न्द्रबि’ न्दु बनाएर गयो यति ठुलो भु’ कम्प , मान्छेको भागा भाग